Duqeymaha Ruushka oo weli ku socda magaalada Kyiv | Arrimaha Bulshada
Home News Duqeymaha Ruushka oo weli ku socda magaalada Kyiv
Duqeymaha Ruushka oo weli ku socda magaalada Kyiv
Bulsha:- Maalintii afraad ayuu galay duullaanka uu Ruushka ku qaaday dalka deriska la ah ee Ukraine, iyada oo shacabka ku nool caasimadda Kyiv ay xalay mar kale intooda badani ku hoydeen guryaha shubka ah iyo godadka tareennada ee mara dhulka hoostiisa, si ay uga gabbadaan madaafiicda culus ee Ruushka.
Sidi habeennadi Jimcihi iyo Sabtidi, xalay ma jirin duqeymo laga soo wariyay magaalada caasimadda ah, marka laga reebo gantaal lagu dhiftay kaalin shidaal oo ku taalla meel 40 km dhanka koofureed kaga beegan Kyiv.
Duqa magaalada Kyiv ayaa Sabtidii ku dhawaaqay bandow xalay magaalada ka dhaqan-galay, kaas oo socon doona ilaa subaxda Isniinta berrito ah. Duqa magaaladu wuxuu sheegay in ciddi lagu arko waddooyinka Kyiv loo tixgelin doono ciidamada Ruushka.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay, in ay xaqiijisay dhimashada 64 qof oo rayid ah iyo dhaawaca 240 kale, ilaa iyo hadda.